आइसोलेसन सेन्टरका लागि चन्द्रागिरी नगर सहकारी समन्वय समितिको आर्थिक सहयोग - सिधा दृष्टी
काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगर सहकारी समन्वय समितिले आज एक कार्यक्रमका बीच चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १२ बलम्बुस्थित कोभिड आइसोलेसन सेन्टरका लागि रु. १ लाख २५ हजार को चेक हस्तान्तरण गरेको छ । चन्द्रागिरी नगर सहकारी समन्वय समितिका सल्लाहकार, नेफ्स्कूनका कोषाध्यक्ष एवम् कास्कूनका अध्यक्ष दीपक पनेरुको नेतृत्वमा समन्वय समितिका संयोजक केशव पौडेल र सचिव लेमन श्रेष्ठको उपस्थितिमा आइसोलेसन सेन्टरका संयोजक विकास महर्जन र सचिव सम्पूर्ण महर्जनलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गरिएको हो ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाको समन्वयमा २०७४ चैत्र
९ गते गठित चन्द्रागिरी नगर सहकारी समन्वय समिति विभिन्न समयमा आवश्यक सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएको छ । कोरोना भाइरस नयाँ भेरियन्ट सहितको दोस्रो लहरको संक्रमण तीब्र भएसँगै बलम्बुमा २०७८ जेठ ८ गतेदेखि आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कोभिड संक्रमित धेरै विरामीहरु आइसोलेसन सेन्टरबाट निको भएर गइसकेका छन् भने हाल सेन्टरमा ८ जना संक्रमित रहेका छन् ।
आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनार्थ विभिन्न संस्थाहरुले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । यस अघि बलम्बु सहकारी समुहबाट पनि रु २ लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको समन्वय समितिका सचिव लेमन श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।